Su'aalaha la Weydiiyo | Beyin xirxirida | warshad bacda cuntada
bunka iyo shaaha
Bacda miraha la qalajiyey
Bacda cuntada eeyga
Bacda qashinka bisadda
Bacaha kale ee xayawaanka
Bacda budada ah
Bacda kale ee hadhuudhka
faaruqinta faakuumka & bacda barafaysan
Bacaha kale ee cuntada
Xashiishka ayaa istaaga bacda
bacda iska caabinta ilmaha
diyaar u ah inay rarto bac
bac warqad fidsan
bacda warqad istaag
bacda warqadda gusset
bacda hoose ee fidsan
duubista filimka balaastigga ah
warqad duub ah
bacda qulqulka dibadda
bacda cuntada ilmaha
1, Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay warshad, oo ku taal Gobolka Liaoning ee Shiinaha, soo dhaweyn si aad u booqato Warshaddeena.
2, waa maxay MOQ-daadu?
Alaabooyinka diyaarka ah ee la sameeyay, MOQ waa 1000 kumbiyuutar, iyo badeecooyin loo habeeyay, waxay kuxirantahay cabirka iyo daabacaadda nashqaddaada. Inta badan alaabta ceyriinka ah waa 6000m, MOQ = 6000 / L ama W halkii kiish, badanaa qiyaastii 30,000 kumbiyuutar. Inta badan ee aad dalbato, qiimaha ayaa hooseeya.
3, ma sameysaa shaqo oem ah?
Haa, taasi waa shaqada ugu weyn ee aan qabanno. Waxaad si toos ah noo siin kartaa naqshadeyntaada, ama waxaad na siin kartaa macluumaadka aasaasiga ah, waxaan kuu sameyn karnaa naqshad bilaash ah. Ka sokow, waxaan sidoo kale haysannaa alaabooyin diyaarsan, soo dhawow inaad wax weyddiiso.
4, Waa maxay waqtiga dhalmada?
Taasi waxay ku xirnaan doontaa naqshadeyntaada iyo tirada, laakiin sida caadiga ah waxaan ku dhammeyn karnaa amarkaaga 25 maalmood gudahood ka dib markaan xaqiijino naqshadeynta iyo dhigista.
5, Sideen kuheli karaa xigasho sax ah?
Marka hore fadlan ii sheeg isticmaalka bacda si aan kuugu soo jeediyo waxa ugu haboon iyo nooca, tusaale ahaan, lowska, waxyaabaha ugu fiican waa BOPP / VMPET / CPP, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa bacda warqadda farsamada gacanta, nooca ugu badan ayaa istaaga bac, leh dariishad ama dariishad la'aan sida aad u baahan tahay. Haddii aad ii sheegi karto maaddada iyo nooca aad rabto, taasi way fiicnaan doontaa.
Marka labaad, cabirka iyo dhumucdiisuna aad ayey muhiim u yihiin, tani waxay saameyn ku yeelan doontaa moq iyo kharashka.
Saddexaad, daabacaadda iyo midabka. Waxaad ku yeelan kartaa ugu badnaan 9 midab hal boorso, kaliya midabka aad leedahay, qiimaha sare ayaa kuu kici doona. Haddii aad leedahay habka daabacaadda saxda ah, taasi way fiicnaan doontaa; haddii kale, fadlan bixi macluumaadka aasaasiga ah ee aad rabto inaad daabacdo oo noo sheeg qaabka aad rabto, waxaan kuu samayn doonaa naqshad bilaash ah.
Fikrad, tiro. Inta badan, ka jaban.
6, Ma u baahanahay inaan bixiyo kharashka silsiladda markasta oo aan dalbado?
Maya. Lacagta silsiladdu waa hal mar oo kharashaad ah, marka xigta haddii aad dib u dalbato isla shandad isku naqshad ah, uma baahna lacag dhululubo ka badan. Silsiladdu waxay ku saleysan tahay cabbirka boorsadaada iyo midabada naqshadeynta. Waxaanan sii haysan doonnaa dhululubadayada muddo 2 sano ah ka hor intaadan dib isu-qorin.
7, Noocee ah qaababka lacag bixinta ee aad aqbasho?
Caadi ahaan 50% deebaaji ah ka dib markaan xaqiijino naqshadeynta, iyo bixinta buuxda kahor keenista. Waxaad ku bixin kartaa TT, kaarka deynta, PayPal, Western Union, Hubinta Ganacsiga, iwm.
8, Sidee ku saabsan kharashka dhoofinta?
Qiimaha rarka waa ka duwan yahay marka loo eego wadarta miisaanka iyo shuruudaha aad doorato. Caadi ahaan cargos ka hooseeya 100kg, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad doorato xawli, sida DHL, FedEx, UPS, iwm, haddii 100-500kg, markab diyaaradeed uu ka fiican yahay, halka haddii uu ka sarreeyo 500kg, dhinaca badda ay fikrad fiican ahaan karto Sidoo kale waxaan kuu sameyn karnaa DDP haddii aad rabto.
Diritaanka qiimaha badeecadaha culeysyo kala duwan, shuruudo iyo waqti kala duwan, waxaan kuu heli doonnaa xalka ugu fiican ee adiga kugu habboon ka hor bixinta.
9, Faylasha noocee ah ayaad u aqbashaa naqshadaha?
Waxaan aqbalnaa AI, PDF, PSD, iwm, feylal kasta oo aad ku tusi karto naqshadaha asalka ah ee lakabyada. Sidoo kale waxaan kaa caawin karnaa inaan kuu abuurno naqshad adiga.
10, Ma bixisaa adeegga iibka kadib?
Haa dabcan. Marka hore, waan hubin doonaa markale iyo markale kahor dhalmada, oo ay kujiraan tayada, tirada, xirxirida, iwm, iskudayna sida ugufiican ee aan ugu balan qaadi karno inaad heli karto bacaha wax lagu keydiyo ee ugufiican. Markaad hesho ka dib, waxaan ku siin karnaa talooyin ku saabsan sida loo buuxiyo, loo shaabadeeyo oo loo xafido. Ka sokow, mar haddii ay jirto dhibaato tayo leh oo ku saabsan boorsooyinkeenna, Waxaan qaadi doonnaa dhammaan mas'uuliyadaha ay tahay inaan qaadno, si firfircoon ayaan kula soo xiriiri doonaa oo aan kuu heli doonnaa xalka ugu habboon
Telefoon ： +86 312-6770499
Emayl ： mialee@foodpackingbag.com
Cinwaanka ： Qolka 310, Liangjiayingzi 2-59, Nanshao Street, Kazuo, Chaoyang, Liaoning, Shiinaha
waad nala soo xiriiri kartaa halkan